Welcome To Shwe Padauk Hospital
Medical Ethic Principles
အဓိက ၄ ချက်ပါတယ် (1) Non-Malificence (2) Beneficence (3) Autonomy (4) Equity and Justice
(1) Non-Malificence ( သူ့အောက်မှာမှ ခေါင်းစဉ် အငယ်လေးတွေအဖြစ် Competency, CPD, Audit, Patient safetyစသဖြင့်ပါတယ်)
သူ့အကြောင်းအရင်စပြောရအောင် သူ့ အဓိပ္ပာယ်က “Do No harm” ပဲ ၊ လူနာကို ကောင်းကျိုးမဖြစ်နိုင်ရင်တောင် ဆိုးကျိုး မလုပ်မိစေဖို့ပဲ။ ဥပမာ - TB ရောဂါမှန်း မသေချာ၊ TB ရောဂါရဲ့ constitutional symptoms တွေ လူနာမှာ မရှိပဲနဲ့ လူနာကို TB ဆေး သောက်ခိုင်းမိတာမျိုး ၊ပြီးတော့ ဆေးခန်းတွေမှာ ဘာလာလာ လူနာကို Dexa ထိုးတာမျိုးတွေ ၊ ပေးရမဲ့ ဆေးရဲ့ dose ကို မှားပေးမိတာမျိုး၊ ရောဂါ ခေါင်းစဉ် မှားတတ်မိတာမျိုး ဒါတွေပါ ပါတယ်။ အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် Level of standard တခုရှိနေရမယ်။ အဲ့လို level of standard တခုဟာပြည့်စုံနေဖို့အတွက် CPD နဲ့ Audit နှစ်ခုနဲ့ ထိန်းညှိသွားရမယ်။ အဲ့တော့ CPD ဆိုတာဘာလဲ? Continuous Profession Development ပါပဲ ဘာလဲဆိုတော့ လူနာကို Do No Harm မဖြစ်အောင် နောက်ဆုံးပေါ် guidelines တွေ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ ကုထုံးနည်းတွေကို Keep In Touch ဖြစ်နေရမယ်။ ဒါဟာ Continuous Profession Development ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုက Audit, Audit ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်၊လူနာကို ကောင်းမွန်စွာဘယ်လိုကုမလဲလို့ အဖြေရှာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဆိုပြီး အဆင့်လိုက် ဆုံးဖြတ်သွားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ Medical Audit ဆိုရာမှာ cycle ရှိပါတယ် ။ Audit Cycle ပေါ့
(1) Identify the problem , question, issue ပြသနာ ၊ မေးခွန်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အရင်ဆုံးIdentify လုပ်
(2) Set the Criteria or Standard ( Criteria or Standard တခုကို စံထား)
(3) Collect data on performance ( ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကနေdata တွေစု)
(4) Compare the performance in real practice with goal standard ( ခုနက စံထား ထားတဲ့ Criteria နဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ကdata တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်)
(5) Identify need for change and implementing change ( နှိုင်းယှဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ငါဘာတွေ လုပ်ဖို့လိုအုန်းမလဲ ဘာတွေ ပြောင်းလဲရမလဲ ဆုံးဖြတ်)
ဒါဟာ Medical Audit and Audit cycle ပါပဲ ဒီလောက်ဆို Non-Malifecence အကြောင်း စုံလောက်ပါပြီ။
သူ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Doing the benefit of the patient ပဲ ။ လူနာအတွက် ကောင်းကျိုး ကို လုပ်ဖို့ပေါ့ လူနာအတွက် ကောင်းကျိုးကို လုပ်ဖို့ဆိုရာမှာ အချက်သုံးချက်ပါတယ် (1)Must Observe Confidentiality
(2)Must practice EBM
(3)Should not think about referral kick about fees (လူနာဆီကနေ ပြန်ရမဲ့ အကျိုးကို မမျှော်ကိုး မစဉ်းစားသင့်)
အဲ့သုံးချက်ထဲက Confidentiality အကြောင်းပြောကြည့်ရအောင် (1) Confidentiality
========== သူ့အောက်မှာ duty ofadoctor ဆိုပြီးထပ်ပါတယ် ဘာလဲ ဆိုတော့ Patients havearight to except that doctor doctor will not disclose any personal information which they learn during the course of their professional duties, unless they give permission. အရှငျးဆုံးပွောရမယျဆိုရငျ လူနာရဲ့ ခှငျ့ပွုခကြျ မရရှိပဲနဲ့ လူနာရဲ့ information အားလုံးကျို လူနာနဲ့ ကိုယျကလှဲလို့ ဘယျသူမှ မသိအောငျထိနျးသိမျးထားပေးရမဲ့ တာဝနျ ဆရာဝနျမှာ ရှိတယျ။ ဒါဟာ Confidentiality ပါပဲ။
ဥပမာ ..... လူနာက သူ့ရောဂါအကြောင်းကို သူ့ဆွေမျိုးကိုပါ မပြောပြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုထားရင် ဆရာဝန်က ပြောခွင့်မရှိပါဘူး၊ လူနာရဲ့ ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ယောက်က လူနာရောဂါဟာ ဘာလဲလို့မေးလာခဲ့သော် လူနာကိုသာတိုက်ရိုက် မေးဖို့ ပြောပေးရမဲ့သဘောပါ။ ဒါပေမဲ့လဲ အဲ့လို လူနာကို တိုက်ရိုက်မေးခိုင်းမယ်ဆိုရင် လူနာဟာ mentally, socially, financially အရ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမှီခိုတဲ့အခြေအနေ ရှိနေရပါမယ်။
သို့သော်လည်း တခြားတဖက်မှာကျတော့ အဲ့လူနာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ ပြောပြထားရမဲ့ တာဝန်ရှိနေပြန်ရော(ဥပမာ.... လူနာက ဆေးရုံတစ်ရုံရဲ့ ICU မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ nurse ဆိုပါစို့။ သူ့မှာ HIVပိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် သူ့ဆေးရုံကအုပ်ချုပ်တဲ့ သူကို သတင်းပိုလ အသိပေး ပြောခိုင်းရမယ်၊ လူနာက မပြောရင် ဆရာဝန်က ဆေးရုံက အုပ်ချုပ်သူကို ကိုယ်တိုင်အသိပေးရမဲ့သဘောပါ၊ ဒါမှသာ ICU လို အရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုး ကနေ တခြားနေရာကို ပြောင်းရွေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်တာမျိုး လုပ်ထားပေးနိုင်မယ်ပေါ့)
လူနာဘာရောဂါဖြစ်ဖြစ် လူနာက မပြောခိုင်းရင် မပြောရတော့ဘူးလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်သေးဘူး။ ဆရာဝန် အနေနဲ့ လူနာရဲ့ Confidentiality ကို ချိုးဖောက်လို့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ အောက်မှာပါတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ လူနာက မပြောခိုင်းထားလဲ ဆရာဝန်က သူ့ဆွေမျိုး သူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကသူတွေကို အသိပေး ပြောရမဲ့တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့-----
1. Notifiable diseases – ကူးစက်ရောဂါတွေ
2. Drug addiction – ဆေးစွဲတာမျိုးတွေ
3. Termination of pregnancy – ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း
4. Sharing information about patients with other members of health care team ဆရာဝန်အချင်းချင်း လူနာရဲ့ရောဂါကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေမှာ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။
(2) Evidence Based Medicine – EBM Beneficence ခေါင်းစဉ်အောက်က နောက်တစ်ခုက EBM ဖြစ်ပါတယ်။ သူအဓိပ္ပာယ်က
EBM is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients It is the ethical duty ofaprofession to keep the up-to-date skill and service the population with best ability.
EBM ဆိုတာ လူနာကို ကုသတဲ့ ကုသမှုတွေမှာတာဝန်ယူမှုရှိ၊ တိကျသေချာခိုင်မာပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေရမယ် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းလင်းတိကျခိုင်မာတဲ့ Guidelines တွေကိုသာ Based လုပ်ပြီး ကုသသင့်တယ်။ အဲ့လိုတိကျခိုင်မာထားတဲ့ Guidelines တွေ Upto Date Skill တွေ Service တွေပေးပြီး လူနာကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ Beneficence ဆိုတဲ့ ဆိုလိုရင်းက လူနာကို အကျိုးရှိအောင် ကုသပေးတဲ့နေရာမှာ
(၁) လူနာရဲ့ Confidentiality ကိုဦးစားပေးရမယ်
(၂) လူနာကို ပေးတဲ့ ကုသမှုတွေမှာ EBM ကိုစွဲကိုင်ပြီးကုသရမယ်။ အဓိက ဆိုလိုရင်းကတော့ ဒါပါပဲ။
နံပါတ် (၃) Autonomy
=============== သူကတော့ နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ပိုကောင်းတယ် ရှုပ်လဲ ရှုပ်တယ်။ ဥပမာ - ငါ့ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငါသတိလစ်သွားရင် ဘယ်သူက ဆုံးဖြတ်ပေးမှာလဲ ဘာဘာညာညာပေါ့
လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး or ရပိုင်ခွင့်
Autonomy က လူနာနဲ့ ဆရာဝန်ကြား ဆက်ဆံရေးမှာ အရေးအကြီးဆုံး အရာအနေနဲ့ပါတယ်။ လူနာကို သူ့ရောဂါအခြေအနေ အကြောင်း ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာတွေ စသဖြင့် information အပြည့်အစုံမပြောပြ ပဲ decision ချခိုင်းတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး၊ မလုပ်ရဘူး။ Autonomy မှာ အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်တယ်။
(1) Truth telling
(3) Good communication
သူ့အဓိပ္ပာယ်က လူနာကို သူ့ရဲ့ရောဂါ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတစ်ခုကိုမှ မထိန်ချန်ပဲ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောပြရမယ်၊ ဖုံးကွယ်လိမ်ညာထားလို့မရဘူး။ လူနာနဲ့ ဆရာဝန်ကြားက ရှိရမဲ့ ယုံကြည်မှု ကို တည်ဆောက်ရာမှ Truth telling က အရေးပါ အရာရောက်တယ်။ လူနာတိုင်းကို ဖြစ်သမျှရောဂါအခြေအနေ အကုန်ပြောပြရမှာလား ဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပြန်သေးဘူး။ သူ့မှာလဲ လူနာကို မပြောပြပဲ ထိန်ချိန်ထားရမဲ့ အခြေအနေ လေးတွေ ရှိတယ်။ လူနာမှာ အောက်က အခြေအနေ တခုခုရှိနေတယ် ဆိုရင် Truth telling မလုပ်ပဲ ချန်ထားလို့ရတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့
(1) It will cause real harm to patient - depressed to suicide
( ကိုယ်ကပြောလိုက်လို့ လူနာက အမှန်တကယ် ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားစေမဲ့ လူနာမျိုး၊ ဥပမာ သူ့ရောဂါအခြေအနေကို ကိုယ်ကပြောပြလိုက်ရင် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားနိုင်လား? သတ်သေသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင် မပြောပြသေးပဲ ခေတ္တခဏ ထိန်ချန်ထားလို့ရတယ်)
(2) Patients make it clear that they do not want to hear the bad news – think of denial
(လူနာက အစကတည်းက သူ့ရောဂါသတင်းဆိုးကို ဘာဖြစ်ဖြစ်မကြားချင်ဘူး မပြောပြနဲ့ မသိချင်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုတာတဲ့ လူနာမျိုး) အဲ့လိုလူနာတွေမျိုးဆိုရင် Truth telling ကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ် ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
Truth telling ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက informed consent
သူ့အဓိပ္ပာယ်က လူနာကို တခုခု ကုသတော့မယ် စစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုရင် မပြုလုပ်မီ လူနာ သဘောတူညီချက် ရယူခြင်းပါ။ သူ့မှာ (၂) ပိုင်းရှိတယ်
(1) Expressed consent (2) Implied consent (1) Expressed Consent သူကတော့ လူနာကို လက်မှတ်ထိုးပြီး တောင်းရတဲ့ consent ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် (2) Implied Consent ဒါကတော့ လူနာကိုမေးစရာမလိုပဲ လူနာက သဘောတူပြီးသား treatment ကို မေးစရာမလိုပဲ လက်ခံပြီးသားကို ခေါ်တာဖြစ်တယိ သူ့မှာလဲ အောက်ပါ အချက်တွေပါဝင်တယ် (၁) Provide enough information (လူနာကို သူ့ရောဂါ ရော လုပ်မဲ့ စစ်ဆေးမဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော သတင်းအချက်အလက် စုံစုံလင်လင်ပေးရပါမယ်) ဥပမာအားဖြင့် Procedure တခုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့ - ဘာ procedure လဲဆိုတာရှင်းပြရမယ် - အဆင့် ဘယ်နှဆင့်လုပ်ရမလဲ ရှင်းပြရမယ် - ဘာကြောင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ ရှင်းပြရမယ် - ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဘာတွေရှိနိုင်လဲ - တခြားပြောင်းလဲ မှုတွေ ရှိနိုင်သေးလား? - ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုး အချိုးအစား? စသဖြင့် တိတိကျကျ ရှင်းပြရမယ် (၂) Should include physician’s recommendation ( သမားတော်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ပါရမယ်) (၃) Patient’s concurrence must be free and unforced (လူနာရဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ချက်ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က တွန်းအားပေးတာမျိုးဖြစ်မနေရဘူး) (၄) Patient must be competent enough to give consent - 18 yr of age လူနာဟာ consent ပေးနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိရမယ်( ဥပမာ - စိတ်ရောဂါ အခြေအနေ ရှိမနေရဘူး၊ အသက် ၁၈နှစ်ကျော်ရမယ်) ၁၈နှစ်အောက်ဆိုရင် မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာပဲ ရှိသေးတဲ့အတွက် consent မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ 👉👉👉အဲ့ဒါပြီးတော့ လူနာ က Decision making capacity ပေးနိုင်လား မပေးနိုင်လားကြည့်ရမယ် ဘာတွေလဲဆိုတော့ ...... - လူနာမှာ Psychiatric ပြသနာရှိနေလား? - လူနာက ကိုယ်ပေးမဲ့ ကုသမှု ဒါမှမဟုတ် လုပ်မဲ့ procedure ကိုနားလည်သလား? - consequence of his choice ဖြစ်ရဲ့လား? - reasonableရောဖြစ်ရဲ့လား? 👉👉👉 အဲ့တော့ ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိလာတာက လူနာက Decision making capacity မပေးနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? 👉👉👉 အဲ့လိုအချိန်ကျရင်တော့ Advanced directed ကိုကြည့်ရမယ်၊ သူက ဘာလဲဆိုတော့ လူနာက decision making capacity မပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူက အပေးနိုင်ဆုံးလဲကို ံကြည့်တာဖြစ်တယိ။ အဲ့တာက လူလဲ ဖြစ်နိုင်သလို စာရွက်လေးတရွက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဥပမာ- သူနေကောင်းစဉ် သတိရစဉ် အချိန်အခါက သူတော့ဖြင့် သတိမေ့သွားရင် ဒီစာထဲကအတိုင်းလုပ်ပါတို့ ဒီလူကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါတို့ စသဖြင့် စာရေး လက်မှတ်ထိုးပြီးမှာခဲ့တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်) ဒါပေမဲ့ အပေါ်က အချက်တွေနဲ့ပြန်ချိတ်မယ်ဆိုရင် (ဥပမာ လူနာက သူသာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် CPR မလုပ်ပါနဲ့လို့ မှာထားခဲ့သည်ရှိသော် သူဟာ CPR အကြောင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်။ CPR အကြောင်းနားမလည်ပဲ မလုပ်ဘူး ဆိုပြီး မှာခဲ့လို့မရဘူး အတည်မယူရဘူးလို့ ဆိုချင်တာပါ) 👉👉👉 ပြီးတော့ Lasting power of atony (LPA) ကိုသိရမယ် ။ LPAက ဘာလဲဆိုတော့ ( ဥပမာ လူနာရဲ့ဆွေမျိုးတွေက အကုန် နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်၊ လူနာက ဒီနိုင်ငံမှာ Living together နေထားတယ်၊ လူနာတခုခုဖြစ်တဲ့အချိန် သူ့သမီးက နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတယ် ၊ အဲ့အချိန် လူနာကို တခုခုဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် လူနာနဲ့အတူ Living together နေထားတဲ့သူနဲ့ သူ့သမီးနဲ့ ယှဉ်လာတဲ့အချိန် သူ့သမီးမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ Living together နေခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ကသာ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်။ လူနာနဲ့ in heart ဖြစ်တဲ့သူကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်မယ်။ ဒါဟာ LPA ပါပဲ) Informed consent မှာ အပေါ်ကအချက်တွေ စုံလင်နေရပါမယ်။ နောက်တခုက Autonomy ထဲမှာပါတဲ့ Good Communication ဖြစ်အောင်ဘယ်လို လုပ်မလဲပေါ့ (3) Good Communication ဆရာဝန်နဲ့ လူနာကြားမှာ good communication တခု ရဖို့ ရှိကိုရှိရမဲ့ လုပ်ကိုလုပ်ရမဲ့ အခြေအနေတွေရှိတယ်
(1) maintainapositive atmosphere, warm manner, good eyes contact (အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမယ်၊ နွေးထွေးတဲ့ အပြုအမူ ၊ မျက်လုံးချင်း ဆက်သွယ်မှု ရှိရမယ်)
(2) use open questions at the beginning (စစချင်းမှာ လူနာကိုသူဖြစ်ချင်တာ စပြောခိုင်းရမယ်)
(3) listen carefully (လူနာပြောတာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ရမယ်)
(4) be alert and responsive to verbal and non-verbal uses နှုတ်ကရော ကိုယ်လက်အမူအရာနဲ့ပါ တုံ့ပြန်နေရမယ်
(5) use specific questions when appropriate (သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို တိတိကျကျမေးရမယ်)
(6) clarify what the patient had told you လူနာက ဘာပြောလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရမယ်
(7) encourage the patient to be relevant လူနာကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းရမယ်
(8) ending –နောက်ဆုံးမှာ
a. summarize what the patient has told လူနာပြောတာတွေကို ပြန်စုစည်းရမယ်
b. ask it your summary is accurate နောက်ဆုံးစုစည်းထားတာတွေဟာပြည့်စုံတိကျ ရဲ့လား ပြန်မေးရမယ်
c. ask if they would like to add anything လူနာကို ဘာများဖြည့်စွက်ချင်သေးလဲ ပြန်မေးရ မယ်
ဒါကတော့ Autonomy ဆိုတဲ့ လူနာရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးမှာပါရမဲ့အချက်အလက်တွေ ဖြစ်ပါတယ် Principle of Medical Ethicsရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်း
(4)Equity and Justice
ဒီအပိုငျးကတော့ သခြာငျ်လိုငျ် တှကျရခကြျရတာတှပေါပွီး အရှုပျဆုံးအပိုငျး နားလညျရအခကျဆုံးအပိုငျးဖွစျလို့ အမှားပါခဲ့ရငျ ကွိုပွီး တောငျးပနျထားပါတယျ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတျ ခငြျသူတှကေတော့ တှကျတာ ခကြျ တာကြောျပွီး ဖတျကွပါလို့ ကွိုပွောထားပါရစေ။ စာကလဲတောျတောျလေးကို ရှညျပါတယျ။ Equity and Justice ကိုတော့ အဓိကအားဖြင့်လူနာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယှဉ်လာတဲ့နေရာမှာ သုံးဖို့ ဆိုရမယ်။ ဥပမာ - ရောဂါ တစ်ခုတည်း အတူတူဖြစ်နေတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကို သုံးစရာဆေးက တစ်မျိုးထဲရှိတယ် ။ အဲ့လိုအခြေအနေမှာ ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးမလဲ? ဘာလို့လဲ ? ကြည့်ကြရအောင် .......... (4) Equity and Justice =============== every patient should haveachance to receive at least minimal standard of treatment. သူ့မှာ အစချီထားပုံက လူနာတိုင်း လူနာတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး standard of treatment ရယူဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ်။ - to prioritize the limited resources. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေက Limited resources ရှိတဲ့ အတွက် prioritize လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ - must be familiar with measurements of cost-benefits ratio. prioritize လုပ်ဖို့ဆိုရင် အောက်ပါအချက် တွေကို ကြည့်ပြီး လုပ်ရမယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့ 1. QALY 2. NNT 3. ARR 4. RRR ဒါကတော့ အတိုကောက်တွေပေါ့။ Equity and Justice ကို ကြည့်ရာမှာ အောက်ကဟာတွေနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ကြည့်ရတယ်။ သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ တွက်ပုံတွက်နည်း တွက်ကြည့်ကြရအောင်။ တော်တော်လေး ရှုပ် ပါတယ်။ (1) QALY (Quality Adjusted Life Year) - To measure the quality and quantity of life သူကတော့ Quality of Life ကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ - A year of healthy life expectancy to be worth – 1 - A year of unhealthy life expectancy to be worth <1 ဒီနှစ်ကြောင်းမှာ ပထမ တစ်ကြောင်းက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသက်ရှင်နေရမှာ တစ်နှစ် ဥပမာ ပြောပြတာပါ ဘေးက ၁က တစ်နှစ်ကိုရည်ညွန်းတာမဟုတ်ပါ) ဒုတိယတစ်ကြောင်းကတော့ အသက်တော့ ရှည်မယ် ဒါပေမဲ့ မကျန်းမမာနဲ့နေရယ် - Lower the valueaworser the QOL. (ဥပမာ Quality of adjusted life yearက ကျန်းကျန်းမာမာ နေရမယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်၊ Value ကနည်းလေလေ ပိုဆိုးလေလေဆိုတာကို ပြောချင်တာဖြစ်တယ်) ဒီနေရာမှာ ရှုပ်သွားပြီထင်တယ်!!!!!!! အတိုချုပ် ထပ်ရှင်းရရင် Quality of life ဆိုတာက သူအသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်သူ့ ကျန်းမာရေးက healthy ဖြစ်လို့ ကျေနပ်နေနိုင် တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ အသက်ရှည်စွာဘယ်လောက်တော့ဖြင့်ကြာကြာနေသွားရမယ်ဆိုတာထက် နေရတဲ့ကာလလေးမှာ ကျန်းမာစွာနေထိုင်သွားနိုင်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ (ဥပမာ - ဒီဆေး ကိုသောက်ရင် နောက်ထပ် ၁၀နှစ်အသက်တော့ရှည်မယ်, သို့သော်လဲ ဒီတိုင်းပဲ တပိန်ပိန် တလှီလှီ နဲ့LY မပြည့်စွာနေရမယ်ပေါ့) အောက်မှာထပ်ရှင်းထားတာကိုကြည့်ရအောင် Eg ..... - An old drug A increase life for 8 years in perfect health (QALY – 8 yrs). - A new drug A increase life for 16 years, but QOL rated by patient only 25%(QALY –4yrs). အဓိပ္ပာယ်က အရင်က သောက်နေတဲ့ old drug ကိုဆက်သောက်နေရင် perfect health ပဲဖြစ်နေမယ်(ကောင်းတယ်ပေါ့)၊ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ထပ်နေရမှာ တော့ ၈နှစ်ဖြစ်မယ်။ ဆေးအသစ်ကိုသောက်လိုက်ရင် ၁၆နှစ်အသက်ရှည်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ 25% ပဲ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေရမယ်၊ ကျန်တဲ့ 75% က ပိုဆိုးလာမယ်၊ ကျန်းကျန်းမာမာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ အသက်တော့ရှည်လာမယ် ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမဲ့ QALY ကတော့ ၄နှစ်ပဲ ဖြစ်မယ်။ နောက်ဆုံးခြုံမှတ်ရင် QALY နည်းရင် မကောင်းဘူး၊ များရင်ကောင်းမယ်။ ကဲဒါဆို နောက်တစ်မျိုးကိုသွားကြည့်ရအောင်........
(2) NNT – numbers need to treat
သူမှာက နှစ်မျိုးရှိတယ် - NNT(B) နဲ့ - NNT(H)
(1) NNT(B) (numbers need to treat for benefit) သူက benefit ရအောင် လူနာဘယ်နှစ်ယောက်များများ ကုရမလဲ ပေါ်မူတည်တယ်(ဥပမာ - patients အယောက် ၁၀၀ကုလို့ ဘယ်နှယောက် အကျိုးရှိမလဲ)
အောက်က ဥပမာလေးကြည့်လိုက်ရအောင် Eg - Woman who has unprotected sex x 1 yearachance of becoming pregnancy = 40% (မိန်းမ တစ်ယောက်က unprotected sex နဲ့နေမယ်၊ အဲ့အမျိုးသမီးက တစ်နှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ချေ က ၄၀% ဖြစ်တယ်) - Woman who takes OC pillsachance of becoming pregancy = 3% (OC pills သောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေက ၃%ပဲဖြစ်တယ်) - Absolute risk reduction (ARR) = 37 % (အဲ့မှာ တကယ်ကို ကျသွားတဲ့ absolute risk reduction (ARR) က ၄၀-၃ ဆိုတော့ = ၃၇% ဖြစ်မယ်။ OC pills သောက်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ ၃၇% လျော့သွားမယ်) အိုကေ ...... Benefitကိုရှာကြရအောင်..... - NNT(B) = inverse of the ARR = 1/ARR = 1/0.37 = 2.7 NNT(B) ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် = ARR ပြောင်းပြန်= 1/ARR = 1/0.37=2.7 1 ကိုတည်ပြီး ARR က %ဆိုတော့ 0.37 နဲ့စား 2.7 ရမယ်၊ 2.7 ဆိုတော့3ထားပါတော့၊ အဲ့တော့....... NNT(B) က ၃ယောက်ဖြစ်မယ်။ ၃ယောက်မှာ ၁ယောက်သည် Benefit ရှိမယ်။ အဲ့တော့ မိန်းမ အယောက် ၁၀၀ကို OC pills တိုက် ရင် ကိုယ်ဝန် မရနိုင်ချေက ၃၇ယောက်ရှိမယ်။ ၃၇ ဆို တော ၃ပုံ ၁ပုံ ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။ ၃ယောက်မှာ ၁ယောက်ပေါ့။ OC pill သောက်တဲ့ မိန်းမ ၁၀၀မှာ ၃၇ယောက် ကိုယ်ဝန်မရဘူးဆိုလို့ ကျန်တဲ့ ၆၃ယောက်က ကိုယ်ဝန်ရမယ်လို့ မတွေးပါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ benefit ကိုပဲတွက်နေတာဖြစ်လို့ benefit ကိုပဲတွေးပါ။ ဒီနေရာလေးမှာသတိမူထားဖို့ပါ။ ကျန်တဲ့ ၆၃ယောက်ကိစ္စတွေးလိုက်ရင် ရှေ့ဆက်လို့မရပဲ ဒေါင်ချာဆိုင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာတင် အတွေး ခနဖြတ်ထားပါ။ သူက တော်တော်လေးကိုရှုပ်တယ်ပြောရမယ်။ နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြတာပေါ့
(2) NNT(H) (number need to treat for harm to occur) ဒီတစ်ခါ benefit မဟုတ်ပဲ harm ကိုတွက်ကြည့်ရအောင် Tamoxifen ဆိုတဲ့ ဆေးကိုသောက်ရင်
- ကောင်းကျိုးက Ca Breast, MI risk ကို ကျစေတယ်
- ဆိုးကျိုးက Ca endometrial နဲ့ Venous thromboembolism ကိုဖြစ်စေတယ်
- ဒီဆေးသောက်တဲ့ Ca Breast လူနာ၁၇ယောက်မှာ ၁ယောက်က တခါသေနှုန်းလျော့တယ်
- Myocardial Infarct က ၂၇ယောက်မှာ ၁ယောက်ကို prevent လုပ်မယ်
- Ca endometrial ဖြစ်မှာက ၁၄၃ယောက်မှာ တစ်ယောက်
- Venous Thromboembolism ဖြစ်မှာက ၁၃၀မှာ တစ်ယောက်
အဲ့တော့ harm ထက် benefit က ပိုများနေလို့ ဒီဆေးကို သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါကိုဆိုလိုခြင်းပါ။ NNT(H) ကိုလဲ အပေါ်က NNT(B) အတိုင်းပဲ တွက်ပါတယ် ထပ်ရှင်းရင် ရှုပ်သွားမှာစိုးလို့ ထပ်မရှင်းတော့ပါဘူး။ နားလည်လွယ်အောင် အတိုချုံးပြောရရင် PCI လုပ်မယ်ဆိုပါစို့။ ဆရာတစ်ယောက်က Clopilet 600mg ပေးမယ် နောက်တစ်ယောက်က 300mgပဲ ပေးမယ်။ အဲ့တာဆိုရင် EBM ကိုသွားကြည့်မယ်။ NNT(B) နဲ့ NNT(H) ပေါ့။ ဥပမာ 600mg ပေးလိုက် လို့300mgနဲ့ယှဉ်ရင် benefit က သိပ်မကွာဘူး bleeding riskကတော့ ပိုများတယ်ဆို မသုံးသင့်ဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ARR ကိုတော့အပေါ်မှာရေးထားပြီးလို့ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံး RRR ကိုပြောကြည့်ကြတာပေါ့။
(4) RRR (relative risk reduction) RRR ကိုသိချင်ရင် RRကိုအရင်သိရပါမယ်။
- RR (relative risk or risk ratio) - RRR ကိုတွက်ရင် RR ရဲ့ တန်ဖိုးကိုအရင်ရှာရမယ်။ -အဲ့တော့ RR ကို တွက်မယ်ဆိုရင် Intervention group ကို Control groupနဲ့ စားရမယ် - Intervention Group ဆိုတာ ဆေးပေးလို့ ရလာတဲ့ အဖြေ ( Y ) လို့ သတ်မှတ်တယ်။ - Control Group ဆိုတာက ဆေးမပေးပဲ ရလာတဲ့ အဖြေ ( X ) လို့သတ်မှတ်တယ်။ - အပေါ်မှာ NNT(B) တွက်ခဲ့တဲ့ OC pill နဲ့ပဲ တွက်ကြည့်ကြရအောင်၊ သူရေးထားတဲ့ control group ဆိုတာက ဆေးမပေးထားတဲ့ group ကိုပြောချင်တာပါ ။ အပေါ်က OC pills နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် OC pills မသောက်ခိုင်းထားတဲ့ Group ပေါ့။ - အဲ့တော့ control group က unprotected sex group ဆိုတော့ 40 ဖြစ်မယ်။ - Intervention group ကOC pills သောက် တဲ့ group ဆိုတော့3ဖြစ်တယ်။ - ရပြီ ၊ အဲ့ဒါဆိုရင် အောက်ကရေးထားတဲ့ ဖော်မြူလာနဲ့ Ratio ချကြည့်မယ်။ Ratio ချမယ်ဆိုတော့ စားရမယ်။ - Ratio of risk in intervention to control group –Y/X အပေါ်က ဖော်မြူလာအတိုင်း Yကို X နဲ့စားမယ် = Y/X = 3/40 = 0.075 ရမယ် ( Y နေရာက 3က Intervention Group ရဲ့ ဂဏာန်းဖြစ်ပီး X နေရာက 40က Control Group ရဲ့ ဂဏာန်းဖြစ်တယ်။ တော်ကြာ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိ မျက်စိကြောင်နေမှာစိုးလို့ ) ဒီတော့ RR က = 0.075 ဖြစ်မယ် ဟုတ်ပြီ ဒီတော့ RRR ကိုတွက်လို့ရပြီ - RRR ( relative risk reduction) - သူကတော့ RRRတွက်တာ ။ RRR ကိုလိုချင် ရင် အောက်ကဖော်မြူလာအတိုင်းသွားမယ်။ = (1-RR) x 100 % = (1-0.075) x 100% = (0.925) x100% RRR = 92.5 % အပေါ်က ပေးထားတဲ့ ဥပမာနဲ့တွက်ချက်မှုအရ အဖြေကိုပြောရရင် OC pills သောက်တဲ့မိန်းမ ၁၀၀မှာ ၉၂.၅% က ကိုယ်ဝန် တားနိုင်ပါမယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တုန်းက ၃၇% ပဲ ကာကွယ်တယ်ဆို။ အခုကျတော့ ဘာလို့ ၉၂.၅% ဖြစ်နေရတာလဲ တွေးစရာရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ရခဲ့တဲ့ ၃၇% ကARR ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး၊ နဂိုထဲက ဘာဆေးမှ မသောက်ပဲနေပြီး ကိုယ်ဝန် ကိုမရတဲ့ Group ရှိပါတယ်။ အဲ့ Group က ၄၀% ကိုပါ ယူတွက်ထားကြောင့်ပါ။ အဲ့တာကြောင့် အပေါ်ဆုံးက NNT(B) တွက်တဲ့အချိန်မှာ လျှောက်မစဉ်းစား မတွေးသေးပါနဲ့အုန်းလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံး အရှင်းဆုံးအချုပ်ပြောရရင် RRR ဆိုတာ ပမာဏ အရေအတွက် ပိုများလာတာပါ ( ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဆေး Company တွေ လာကြေငြာနေတဲ့ ဒီဆေးသောက်ရင်တော့ဖြင့် ၈၉ ယောက် ၉၂ ယောက်ကတော့ ဘာရောဂါ မဖြစ်ဘူး ဘာညာဆိုတာ RRR ကိုပြောခြင်းပါ) ။ တော်တော်လဲ ခေါင်းရှုပ်နေလောက်ပါပြီ။ နှစ်ခါ သုံးခါလောက် ပြန်စဉ်းစားရင် မှတ်မိပြီ လွယ်ကူသွားမှာပါ။ ကဲ အပေါ်ကသင်္ချာတွေ တွက်ချက်တယ်ဆိုတာက တကယ့် မြေပြင်မှာ လူနာနှစ်ယောက်ယှဉ်လာရင် ဘယ်သူ့ကို Prioritized လုပ်မလဲဆိုတာကို အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့တဲ့ QUALI တို့ NNT တို့နဲ့ တွက်ပြီး Priority ကိုရွေးချယ်ရမှာမို၊ ပြီးတော့ ဆေးအဟောင်းကနေ အသစ်ပြောင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင် ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဘယ်ဟာပိုများလဲသိအောင်တွက်ကြရတာပါ တကယ့် Equity and Justice မှာရော (၁) ဘာတွေပါမလဲ? (၂) ပြသနာက ဘာတွေရှိမလဲ (၃) ဘယ်လိုရောဂါတွေကို ဦးစားပေးကုမလဲ? (၄) အပေါ်မှာရေးထားသလို ရောဂါတူ လူနာနှစ်ယောက်ကို ပေးစရာ ဆေးတစ်မျိုးပဲ ရှိတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးမလဲ? ကြည့်ကြရအောင်........ Euity and justice ============ – three perspectives( သုံးခုပါမယ်)
1. Respect for needs of the individual
a. Health care is delivered first to those who need it most- some kind of triage သူကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ ကုသမှု လိုအပ်ချက်ကို လေးစားရမယ်ဆိုထားတာပါ။ အရေးပေါ်ကုသမှု လိုအပ်တဲ့သူကို အရင်ဦးစားပေး ကုသပေးရမယ်ပေါ့။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။
2. Respect for the rights of the person
a. Everyone who needs health care is entitled toafair share of the resources available. ဒီအချက် ကုသမှုလိုအပ်တဲ့ လူနာတိုင်းမှာ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့လိုကုသပေးတဲ့နေရာမှာ Fair ဖြစ်ရမယ် ပြောချင်တာပါ။ (ဥပမာ- ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူမို့ ပိုဂရုစိုက်လိုက်မယ် ဆင်းရဲတဲ့သူမို့ သိပ်ဂရုမစိုက်ဘူး။ အဲ့လိုဖြစ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စစ်သားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရဲဘော်မို့ ဗိုလ်ကြီးမို့ ဗိုလ်မှူးမို့ ဗိုလ်ချုပ်မို့ဆိုပြီး အဆင့်အတန်းခွဲပြီး မကုသရပါဘူး။ ကုသရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အားလုံးက တန်းတူ Fair ဖြစ်နေရမယ်ကိုဆိုလိုတာပါ။
(3) Respect for merit
(a) Health is delivered on the basis of value judgements, according to financial, political, social or other factors relating to the value of the individual to society. ဒါကတော့ လူနာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးကုမလဲယှဉ်လာရင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို မူတည်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - အသက် ၇၀ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပင်စင်စား Professor တစ်ယောက်နဲ့ အသက် ၃၅နှစ်သာရှိသေးတဲ့ CSW မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့ဟာ ဆေးရုံကို ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့ တပြိုင်တည်း ရောက်လာတယ်။ အသက်ရှု စက်ကို နှစ်ယောက်စလုံးတပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဆေးရုံမှာ အသက်ရှုစက်က တစ်လုံးပဲ ရှိတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ဦးစားပေးကုမလဲ? အဲ့အချိန်မှာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်မှုတွေကိုမူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အသက် ၇၀ ပင်စင်စား professor ကြီးဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ သိပ်မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး၊ သူ့သက်တမ်းကလဲ သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။ တစ်ဖက်က အသက် ၃၅နှစ် အရွယ် CSW ဆိုပေမဲ့ သူ့မှာလဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကျိုးပြုနိုင်မှာတွေရှိပါတယ်။ သက်တမ်းအားဖြင့်လဲ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှုစက် တပ်ဖို့ တစ်ယောက်ကို ရွေးပါဆိုရင် အသက် ၃၅နှစ် အရွယ် CSWကောင်မလေးကို ရွေးရပါမယ်။ ဆိုလိုရင်းက ဒါပါပဲ။ Justice ကတော့ တွက်ချက်တာတွေပါ ပါလို့ တော်တော်လေးရှည်ပြီး ခေါင်းလဲရှုပ်ရပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ Equity and Justice လဲပြီးပါပြီ။
Narcissism types တွေအကြောင်းဆက်မပြောခင် ဒီစကားလုံးဘယ်က ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာလေး အရင်ပြောပြပါရစေ။ Narcissism ဆိုတာ Greek Mythologyလို့ခေါ်တယ့် ဂရိ ဒဏ္ဍာရီထဲက သူ့ရုပ်ပုံကိုသူအလွန်အမင်းချစ်မြတ်နိုးပြီး သူ့ရုပ်ပုံပေါ်တယ့် ရေအိုင်နားကနေ မခွာနိုင်တော့ပဲ သူ့ပုံသူကြည့်ရင်း သေသွားတယ့် Narcissusဆိုတဲ့ လူငယ်လေးကို အခြေပြုပြီး ပေါ်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ Narcissismအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ကျမတို့ လူသားအားလုံးမှာ အနည်းနဲ့အများ egoဆိုတဲ့ အတ္တရှိကြတာကြောင့် တနည်းမဟုတ်တနည်း ကျမတို့မှာလဲ Narcissistဖြစ်နိုင်ချေရှိနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ အတ္တ နဲ့ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်စိတ်တွေ ရှိနေသလို တဖက်မှာလဲ သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုယ်ချင်းစာစိတ် စာနာသနားစိတ် စေတနာမှန်နဲ့ ကူညီဖေးမလိုစိတ်တွေရှိနေသရျ် ကျမတို့ဟာ နာစစ်စစ် မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ ရောဂါသည်လို့ သတ်မှတ်ထားတယ့် နာစစ်စစ်တွေ တနည်းအားဖြင့် Pathologically Narcissists ဖြစ်သူတွေဟာ သာမာန် healthy narcissistsနဲ့မတူတာက သူတို့ဟာ လူငယ်ဘဝကစပြီး တောက်လျောက် အစွန်းရောက်တဲ့ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ အနိုင်ရလိုမှုတွေ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ လိမ်လည်မှုတွေ၊ခိုးယူမှုတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုတွေကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်တတ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
နာစစ်စစ်တွေရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတယ့် အလေ့အထခုနှစ်ချက်ကို Seven Deadly Sins of Narcissismလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
1. အရှက်တရားကင်းမဲ့မှု, သူတို့ဟာ ရှက်တယ့်စိတ်ကို အလွန်မုန်းကြတယ်။ ရှက်တယ့်စိတ်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ လူကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားစေတာ သူဟာ မပြည့်စုံဘူးလို့ ခံစားစေတာမို့ ရှက်တယ့်စိတ်ကို သူတို့လုံးဝမနှစ်မြို့ကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မရှက်တတ်အောင် ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ သူများ ပစ္စည်းခိုးတာ အနိုင်ပိုင်းပြီးယူတာတွေ မကြာခဏလုပ်တတ်သလို ပြီးရင် လုပ်သင့်လို့လုပ်တာ ဘာမှရှက်စရာမလိုဘူးလို​့ သဘောထားတတ်ကြတယ်။ လိမ်ညာတာ ဖောက်ပြန်တာတွေအပေါ်လဲ ရှက်လေ့မရှိပဲ ဒါဟာ လူ့သဘာဝဆိုပြီး သာသာယာယာ လိမ်ညာဖောက်ပြန်တတ်ကြတယ်။
2. သူတို့သာ အတော်ဆုံး၊ ငါသာသိ ငါသာမှန်၊ ငါ့လောက်ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားတတ်ဘူး။ တလောကလုံးက ငပိန်းတွေချည်း။ ငါကတော့ အထူးခြားဆုံး ပါရမီရှင်ဆိုပြီး ဘဝင်လေဟပ်နေတတ်တယ်။ သူ့အောင်မြင်မှု သေးသေးလေးကိုတောင် ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဂျပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ပြောတယ်။ သူ့ဘေးက လူအားလုံး သူ့ကိုရှိန်အောင် အမြဲကြွားနေတတ်တယ်။သူတစ်ပါး ချီးကျူးတာကို အမြဲခံချင်နေတာမျိုး။
3. မောက်မာထောင်လွှားတယ်။ တလောကလုံးကို အပေါ်စီးကပဲ ဆက်ဆံချင်ကြတယ်။ အပေါ်စီးဆန်ဆန် စကားပြောတတ်တယ်။ လူမသိ သူမသိကူညီရမှာမျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖူး။ နမည်ကြီးဖို့ သေချာမှ ကူညီတယ်။ ကူညီတာနဲ့ တန်အောင် ဂုဏ်ဖော်တယ်။ သူကူညီခဲ့တာကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောပြီး တဖက်လူကို အပေါ်စီးက ဆက်ဆံတယ်။
4. သူတစ်ပါးကို ချိုးနှိမ်ရတာ သဘောကျတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ကြွားဝါမြှောက်ပင့်ပြောဆိုသလောက် သူတစ်ပါးကိုတော့ ရှေ့တင်ချိုးနှိမ်တတ်တယ်။ သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာမျိုးကိုကျ လုံးဝမကြားချင် မမြင်ချင်ဘူး။ စကားပြောရင် သူတော်ကြောင်း တတ်ကြောင်းချည်း တချိန်လုံးပြောပေမယ့် သူများပြောရင်တော့ နားထောင်မပေးတတ်ပဲ စကားစဖြတ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာကို မုဒိတာမထားတတ်သလို ခံနိုင်ရည်မရှိဘူး။ အခြားသူရဲ့ အဆင်ပြေနေမှု အောင်မြင်မှုက သူ့ကို နာကျင်နေစေတယ်။
5. လူတကာသူ့ကို မြှောက်ပင့်တာ ခံချင်တယ်။ ပစားပေးတာ ခံချင်တယ်။ သူ့ကို နဲနဲလောက် သာမာန်သို့မဟုတ် မထီမဲ့မြင်ဆက်ဆံမိရင် အကြီးအကျယ် ပြသနာတွေရှာ တဖက်လူရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကိ​ု လက်မခံတော့ပဲ တစိတ်ကို တအိတ်လုပ်ပြီး တဖက်လူဒုက္ခရောက်အောင် အပြစ်ပေးတော့တယ်။ အဲ့ဒါကို Narcisstic rageလို့ ခေါ်တယ်။ ဘာမဟုတ်တာလေးအတွက် ဒေါသအကြီးကြီးထွက်ပြီး ကလဲ့စားချေတာကို ခေါ်တာ။ ဘယ်တော့မှ ဘယ့်သူကိုမှ ခွင့်မလွှတ်တတ်ဖူး။ သူတို့ကို ဝေဖန်တာကိုလဲ သေးသေးလေးတောင် မခံနိုင်ကြဘူး။ ဘာမှဟုတ်တဲ့ ဝေဖန်မှုကြောင့်တောင် လူသတ်ဖို့ ကြံစည်သည်အထိ ကလဲ့စားချေတတ်ကြတယ်။
6. သူတစ်ပါးကို နည်းစုံသုံးပြီး အသုံးချတယ်။ သူကောင်းစားဖို့ သူအဆင်ပြေဖို့ သူတစ်ပါးကို အချိုသတ်တာရော ဝါဒမှိုင်းတိုက်တာရော ခြောက်လှန့်တာရော နည်းစုံသုံးပြီး သူလိုချင်တာယူတယ်။ အဲ့အတွက် တဖက်လူခံစားရတာတွေကို တချက်တောင် ငဲ့လေ့မရှိဘူး။ သူလိုချင်တာရဖို့ တဖက်သားဘဝကို ချနင်းတတ်သူတွေ။
7. လူ့စည်း ဘီလူးစည်းဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။ သူတစ်ပါးဘဝထဲ အတင်းပါ နေရာယူ။ သူတစ်ပါးပစ္စည်း သူတစ်ပါးအိမ်ထောင်ရေး သူတစ်ပါးဆုံးဖြတ်ချက်အကုန်ဝင်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်က တဖက်လူဟာ သူမရှိရင်မဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်အောင်။ ဒါမှ သူရဲ့ ဘေးမှာ သူ့သားကောင်အဖြစ် ပိတ်မိနေအောင်လို့။ သူ့သားကောင်မှာ သူ့အပြင် စကားပြောစရာ ရင်ဖွင့်စရာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ မိသားစုစသဖြင့်မရှိတော့အောင် အကုန်ဝင်ဖြတ်တာ။ ပြီးမှ အဲ့လူကို တနေ့တခြား သူကိုယ်သူ ပျောက်ဆုံးပြီး ကိုယ့်သားကောင်ဘဝထဲ ရုန်းမထွက်နိုင်အောင် ချည်နှောင်တာ။ တဖက်လူ ရုန်းဖို့အင်အားလုံးဝမရှိတော့တာ့် အချိန်ကျမှ ပြစ်စလက်ခပ် စွန့်ပစ်တာ နာကျင်အောင်နှိပ်စက်တာ စသဖြင့် ဆော့ကစားတော့တာပဲ။
ဒီအချက်တွေအားလုံးလိုလိုကို နာစစ်စစ်တွေဆီမှာ အနည်းအများကွာတာက လွဲလို့ အားလုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ အမြဲလဲတွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဘယ်အလုပ်မှာမှ လပိုင်းထက်မမြဲကြသလို ဘယ်ရည်းစားနဲ့မှလဲ ကြာရှည်မ​မြဲကြဘူး။ ဖောက်ပြန်ရတာကို အလွန်ခုံမင်တတ်ကြတယ်။
နာစစ်စစ်တွေဟာ အမျိုးသားတွေချည်း ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က သားယောကျ်ားလေးတွေဆိုရင် သူတို့ခံစားချက်ကို မဖွင့်ချခိုင်းတာ ငိုခွင့်မရတာ ပျော့ညံ့တယ်ထင်မဆိုးလို့ မြိုသိပ်ရတာ ရာထူး ငွေ ဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာတာ စတဲ့ patriachyရဲ့ ကြီးစိုးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တခါ ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက် သူတစ်ပါးအပေါ် အနိုင်ကျင့်တာ မကောင်းတာလုပ်တာဆိုရင် ယောကျ်ားလေးပဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမပေါ့ဆိုတဲ့ ဓလေ့ကြောင့်လဲ ယောကျ်ားအတော်များများဟာ နာစစ်စစ်behaviorနဲ့ အသားကျနေတတ်ပါတယ်။ တဖက်မှာတော့ မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် ဒီလို အပြုအမူတွေ လုပ်ရင် ကလေးထဲကပင် ဟယ်မိန်းကလေးတန်မဲ့ မောက်မာတာ မျက်နှာများတာ စသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ဖိနှိပ်တာတွေကြောင့်လဲ မိန်းမနာစစ်စစ်တွေဟာ မသိမသာအနေအထားနဲ့ပဲ နာစစ်စစ်ဆက်ဖြစ်နေကြရပြီး ယောကျ်ားတွေလို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် နာစစ်စစ်မဖြစ်နိုင်ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
Narcissism ဟာ ဟိုးကလေးဘဝထဲက သူမွေးဖွားရှင်သန်လာရတဲ့ အခြေအနေကြောင့်လို​့ ဆိုရာမှာ အဓိကက အစွန်းနှစ်ဘက်ဆန်တဲ့ parenting ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရမ်းကို မြှောက်ထားပြီး လိုတရ သူသာလျှင်အရေးအပါဆုံးလို့ အထင်ရောက်စေတယ့် precious childအတော်များများဟာလဲ နာစစ်စစ်ဖြစ်လာကြသလို တဖက်မှာလဲ အမြဲအပြစ်တင် ရှုံချ ဒဏ်ပေးတတ်တယ့်မိဘ၊ စိတ်ဓါတ်ယုတ်ညံ့သလို အပြုအမူယုတ်ညံ့တယ့်မိဘ တနည်းအားဖြင့် နာစစ်စစ်တွေရဲ့ ကလေးတွေဟာလဲ နာစစ်စစ်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျမတို့အနေနဲ့ parenting မှာ အလယ်အလတ်လမ်းလိုက်ပြီး မျှတတယ့်ချစ်ခြင်း ဂရုစိုက်ခြင်းတွေနဲ့ မွေးမြူကြဖို့လိုသလို တဖက်မှာလဲ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အတ္တနဲ့ပရ မျှတအောင် ကျင့်ကြံရင်း နေထိုင်သွားဖို့လိုပါကြောင်း ပြော​ကြားရင်း နောက်အပိုင်းကို ဆက်စောင့်ဖတ်ကြပါလို့။ ကျေးဇူးပါ။
Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Shwe Padauk Hospital